အသဲကွဲသူနှင့် ဆိုကရေးတီး – Shwe Thoon 8 Online Media
ဂရိ အတွေးအခေါ် ပညာရှင် ဆိုကရေးတီးသည် မစားမသောက်ဘဲ မှိုင်တွေ ငေးမောနေသော လူငယ် တစ်ဦးကို မြင်သော် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ခံစားနေရသနည်းဟု မေးလေ၏။
လူငယ် – ကျွန်တော် အသဲကွဲနေလို့။
ဆိုကရေးတီး – အော်… ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသဲကွဲလို့ နာကျင်တာ မခံစားရဘူးဆိုရင် ချစ်ခဲ့ရတာ အရသာ မရှိသလိုဘဲ။ ဒါပေမယ့် လူလေးက ဘာဖြစ်လို့ ဒီအသဲကွဲတဲ့ ဝေဒနာကို ချစ်တာထက် ပိုနစ်ပြီး ခံစားနေရသလဲ။
လူငယ် – လက်ထဲရောက်လာတဲ့ စပျစ်သီးကို ပစ်လိုက်ရတယ်။ ဒီလိုခံစားရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဝေဒနာကို လူငယ် မဟုတ်တဲ့ ခင်ဗျားက ဘယ်နားလည်နိုင်မလဲ။
ဆိုကရေးတီး – ပစ်လိုက်ရပြီဆိုလဲ ပစ်လိုက်ရပြီပေါ့။ ဘာလို့ရှေ့ဆက် မလျောက်ရတာလဲ။ ဒီ့ထက် ပိုချို တဲ့ စပျစ်သီးတွေ အများကြီးပါ။
လူငယ် – တကယ်တော့ သူပြန်လာမဲ့နေ့ကို ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေမိတာပါ။
ဆိုကရေးတီး – တကယ်လို့ ဒီလိုနေ့မျိုး လုံးဝ ရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ခြားတစ်ယောက် လက်ထဲ သူပါသွားတာကိုပဲ လူလေး ကြည့်နေရလိမ့်မယ်။
လူငယ် – ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်အဆုံးစီရင်ပြီး သူ့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်း သက်သေ ပြမှာပေါ့။
ဆိုကရေးတီး – ဒီလိုသာ သက်သေပြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကိုလဲ ဆုံးရှုံးမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လည်း ဆုံးရှုံးမယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ ဆုံးရှုံးခြင်းကို လူလေး ခံစားရလိမ့်မယ်။
လူငယ် – ဒါဆို သူ့ဘ၀ ပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်။ ကျွန်တော်မရတာကို သူတစ်ပါး လည်း မရစေချင်ဘူး။
ဆိုကရေးတီး – ဒီလိုလုပ်ရပ်က သူနဲ့ ပိုဝေးစေမယ်။ လူလေးက သူနဲ့နီးချင်တာ မဟုတ်လား။
လူငယ် – ဒါဆို ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်တော် သူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်။
ဆိုကရေးတီး – တကယ် အရမ်းချစ်လား….?
လူငယ် – တကယ်။
ဆိုကရေးတီး – ကိုယ့်ချစ်တဲ့ သူကို ပျော်ရွှင်စေချင်တယ် မဟုတ်လား….?
လူငယ် – ဒါပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကို ပျော်ရွှင်စေချင်တာပေါ့။
ဆိုကရေးတီး – တကယ်လို့ လူလေးကို ခွဲသွားတာက သူ့အတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းလို့ သူထင်ခဲ့ ရင်ကော။
လူငယ် – မဖြစ်နိုင်တာ။ ကျွန်တော်နဲ့နေမှ သူပျော်ရွှင်တယ်လို့ အရင်က သူပြော ခဲ့ဖူးတယ်။
ဆိုကရေးတီး – အဲဒါက အရင်က ပြီးခဲ့ပြီလေ။ ခုတော့ သူက ဒီလိုမထင်တော့ဘူးလေ။
လူငယ် – သဘောက ကျွန်တော့်ကို သူလိမ်ခဲ့တာပေါ့။
ဆိုကရေးတီး – ဒီသဘော မဟုတ်ဘူး။ လူလေးအပေါ် သူသစ္စာရှိခဲ့တယ်။ ချစ်တုန်းက လူလေးနဲ့ အတူ နေခဲ့တယ်။ အခုမချစ်တော့ ခွဲသွားတယ်။ ဒီလောကမှာ ဒီထက်မြတ်တဲ့ သစ္စာ မရှိတော့ဘူး။ မချစ် တော့ဘဲနဲ့ သူဟာချစ်ချင် ဟန်ဆောင်ပြီး လူလေးနဲ့ အတူရှိနေမယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်မယ်၊ သားသမီးတွေ မွေးမယ် ဆိုရင် ဒါကမှ တကယ့် လိမ်ညာတယ်လို့ ခေါ်တာ။
လူငယ် – နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်တွေ အလဟဿ ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့။ ဘယ်သူ အလျော်ပေးနိုင်မလဲ…?
ဆိုကရေးတီး – မဟုတ်ဘူး လူလေးရဲ့။ အချစ်တွေ အလဟဿ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အလျော် ဆိုတာ အချစ်မှာ မရှိဘူး။ လူလေးရဲ့ အချစ်တွေ သူ့ကိုပေးဆပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူကလဲ သူ့အချစ်ကို လူလေး အတွက် ပေးဆပ်နေတယ်။ သူ့ကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့သလို လူလေးကိုလဲ သူက ပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်။
လူငယ် – ဒါပေမယ့် အခု ကျွန်တော့်ကို သူက မချစ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ချစ်နေသေးတယ်။ ဒါဟာ မတရားဘူး။
ဆိုကရေးတီး – ဟုတ်တယ် မတရားဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက လူလေးချစ်တဲ့သူအတွက် မတရားဘူး။ သူ့ကိုချစ်တာဟာ လူလေးရဲ့ အခွင့်အရေး ဒါပေမယ့် သူပြန်ချစ်တာ မချစ်တာက သူ့အခွင့်အရေး၊ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုပဲ မျှော်ကိုးပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ကိုယ်က တားဆီးပိတ်ပင်မယ်။ ဒါမှ မတရားတာ။ ဘယ်လောက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိသလဲ။
လူငယ် – ခင်ဗျားပြောပုံနည်းအရဆိုရင် နောက်ဆုံးတော့ အရာအားလုံးဟာ ကျွန်တော့် အမှားတွေပေါ့။
ဆိုကရေးတီး – ဟုတ်တယ်။ စတာနဲ့ လူလေးမှားခဲ့ပြီ။ တကယ်လို့ ကိုယ်ကသူ့ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကို သူခွဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ကင်းကွာချင်တဲ့လူ မရှိဘူး။ ဒါကိုတော့ မှတ်ထားပါ။
လူငယ် – ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျွန်တော့် အသဲနှလုံး အချစ်တွေ အားလုံး ပုံပေးလိုက် တာ တောင် သူက မလုံလောက်လို့လား။ သူဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ခွဲသွားရသလဲ။ ဒါဟာ ရက်စက် တယ်လို့ မထင်ဘူးလား။
ဆိုကရေးတီး – ရက်စက်တယ်။ ဒီလို ရက်စက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စက်ကွင်းက လွတ်သွားတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်ရမယ် မဟုတ်လား။ လူလေး
လူငယ် – ပျော်ရမယ်။ မဖြစ်နိုင်တာ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ဟာ အစွန့်ပစ်ခံရသူ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညံ့တယ်လို့ ခံစားမိတယ်ဗျာ။
ဆိုကရေးတီး – မဖြစ်နိုင်တာ။ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်မှာ ကြီးမြတ်တာပဲ ရှိသင့်တယ်။ ညံ့တယ်ဆိုတာ မရှိသင့်ဘူး။ မှတ်ထားရမှာက စွန့်ပစ်ခံရတိုင်း မကောင်းလို့ မဟုတ်ဘူး။
ဆိုကရေးတီး – တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ၀တ်စုံတစ်စုံကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ လိုချင်တာလဲ အရမ်းပဲ။ ရောင်းတဲ့လူက ယူမှာလား မယူဘူးလားတဲ့။ အဲဒီတော့ ဒီလူက ဘာပြန်ပြော လိုက်သလဲ သိလား။ အ၀တ်စက ညံ့လွန်းတယ်။ မယူဘူးတဲ့လေ။ တကယ်တော့ သူ့ အိတ်ကပ် ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ညံ့လွန်းတယ် တမင်ဖြေခဲ့တာ။ လူလေးက အဲဒီ အစွန့်ခံ ၀တ်စုံလိုပါပဲ။
လူငယ် – ခင်ဗျား တော်တော်နှစ်သိမ့်တတ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် နှမြောဖို့ကောင်းတာက ဒီအသဲကွဲတဲ့ ဝေဒနာထဲ ကနေ ကျွန်တော်ကို ခင်ဗျား ဆွဲမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဆိုကရေးတီး – ဟုတ်ပါတယ်။ ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့အစွမ်း မရှိခဲ့လို့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွမ်းရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
လူငယ် – ဘယ်သူလဲ။
ဆိုကရေးတီး – အချိန်တဲ့။ အချိန်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော လမ်းညွှန်ဆရာ။ အသဲကွဲ ဝေဒနာကို အလူးအလှိမ့် ခံစားနေရတဲ့ လူတွေကို ကျုပ် မြင်ဖူးတယ်။ အချိန်က သူတို့ ခံစားရတာ တွေကို ကုစားပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး လူတွေကို အသစ်တစ်ဖန် ရွေးချယ်စေခဲ့တယ်။ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန် တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ခံစားခဲ့ရတယ်။
လူငယ် – ဒီလိုဖြစ်လာမယ့်နေ့ကို မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကနေ ခြေလှမ်း စလှမ်း ရမလဲ။
ဆိုကရေးတီး ကိုယ့်ကို စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ လူကို အရင်ဆုံး ကျေးဇူးတင်ပါ။ တောင်းဆုပြုပါ။
လူငယ် – ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဆိုကရေးတီး – သူက ကိုယ့်ကို သစ္စာတွေပေးခဲ့လို့ပဲ။ ကိုယ့်ကို အသစ်တစ်ဖန် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို သူက ပေးခဲ့လို့ပါပဲ။
← ရေသောက်နည်းရင် ဒီဆိုးကြိုးတွေဖြစ်လာမယ်
အသဲကွဲလျှင် အမျိုးသားများက ပိုခံစားရ →